Imidwebo Epholile Ngemidwebo Elula Nemibono Yemibala kusuka Ithuluzi Lombala - Scantegrity
Imidwebo Epholile Ngemidwebo Elula Nemibono Yemibala kusuka Ithuluzi Lombala
Umhlaba ongenabo ubuciko we-eh!, Futhi ukudweba kungenye yobuciko engibathandayo. Nonke niyazi ukuthi ingxenye okunzima kakhulu ukuyipenda ukuqala. Kulokhu, ungadinga ukuthola imidwebo epholile noma imidwebo elula yokudweba ukuqala. Kuhle, uma uhlola inqwaba yemidwebo emihle engaba imibono emihle ngomdwebo wakho olandelayo. Uyabona, kunenqwaba yendlela yokudweba ongayisebenzisa. Ukungasho, kuhle ukufaka umdwebo nge twist.
Ngokusobala, le ndatshana izokukhombisa inqwaba yemidwebo ebushelelezi esuka kusidwebo esipholile kuya kwabilula. Vele, ungazisebenzisa kunoma iziphi izisekelo zokudweba. Ngempela, ukudweba kufana nokuthatha isithombe. Bobabili banenhloso efanayo yokudala isithombe esikwazi ukuxoxa indaba. Ungayakha le ndaba ku-canvas mtu noma ngisho nakwezimanga zomhlaba.
Yini Oyaziyo Ngokupenda?
Yebo, ukudweba kuyingxenye yobuciko. Lapho uzwa ngokupenda, kufanele ukhumbule ukugqekeza, upende, ummese wephalethi, isiponji kanye ne-airbrush. Kuyiqiniso, ukudweba kungumphumela wesenzo futhi umdwebo uyinto.
Ayikho i-dout, ungasho ukuthi ukupenda kubhekwa njengobuciko njengoba kuhlobana nefomu lawo kunendlela yesitayela noma inqubo yayo. Yebo, ubuciko be-graffiti nomdwebo wamafutha kuyizinhlobo ezimbili zokupenda. Uyabona, umdwebo we-arcylic ungobuso besimanje bendlela yokupenda. Ngakho-ke, uma ufuna ukudala okuthile kwanamuhla, i-acrylic tehnique kungcono ukuyifaka.
Yiziphi izinhlobo ezingama-32 zokupenda Tehcnique?
ISotto In Su
Futhi, ziyini Izitayela Zokupenda?
Ngolwazi, kunezinhlobo ezimbili zezitayela zokupenda okufanele uzazi. Esisodwa isitayela sesentshonalanga kanti esesibili isitayela sasempumalanga. Ukufakelwa kwakho konke, nalu uhlu lwezitayela zasentshonalanga ekupenda:
I-Figurativism / Ubuciko Bokomfanekiso
I-Art Deco – ubuciko obukwayo, izakhiwo nokwakhiwa
I-Art Nouveau – ephefumlelwe yimvelo
Okwamanje, izitayela ze-easter ekupendweni yilezi:
Imidwebo yaseNdiya: iTanjore, Mughal, Rajasthani kanye nePatachitra
Sebenzisa Umbala Picker Ukuze Uthole Ukuphefumlelwa Kwemibala
Bangaki kini abanesizungu sokusebenzisa umbala ofanayo kwimidwebo yakho? Hhayi-ke, kungadingeka ukuthi wazi ukuthi umuntu okhetha imibala angakunika imibono engaphezulu kwezigidi eziyi-1.8. Ngiqonde ukuthi, lapho ubona isithombe, ungathola umbala ofuna ukuwusebenzisa kumdwebo wakho. Kepha, kwenzekani uma ungakwazi ukubala umbala ofuna ukuwusebenzisa? Uzothola ukudideka!
Ngokusobala, uma usebenzisa okokukhetha imibala, uzokwazi uhlu lokufakwa kombala ngaphakathi kwesithombe, isithombe, noma isithombe. Ngolwazi, ithuluzi kulula ukulisebenzisa futhi lizosebenzisa umzuzu owodwa. Kumele nje ulungiselele isithombe ofuna ukuhlaziya umbala futhi uzothola imininingwane yesithombe. Olunye ulwazi ongaluthola igama lombala, i-RGB, ne-HEX. Ithuluzi elihle kanjani, angithi?
Ungasisebenzisa Kanjani Umbala Picker?
Kubukeka sengathi awunakulinda ukusebenzisa okokukhetha imibala. Ngakho-ke, ngaphandle kokuqhubeka, ungabheka izindlela ezilandelanayo zokusebenzisa isikhi sombala. Nakhu ke!
Isinyathelo 1: Thola isithombe, isithombe, noma isithombe kudivayisi yakho
Into yokuqala kuqala, udinga ukuthola isithombe, isithombe, noma lokho okubiza njengesithombe kudivayisi yakho. Vele, ungayilanda kusuka ku-inthanethi. Ngaphandle kwalokho, ungayihlola kabusha emthonjeni othile. Uma unekhamera, ungathatha isithombe sento ngqo.
Isinyathelo 2: Layisha i-Image, Image, noma Photograph on the Colla Tool Tool
Uma ubona, ithuluzi elilandelayo likunikeza isikhala sokulayisha isithombe. Well, udinga ukukhetha isithombe, isithombe, noma isithombe esifanele.
Isinyathelo 3: Beka enye incazelo yoMfanekiso
Ngemuva kokulayisha isithombe, udinga ukwengeza incazelo ethile. Ngokusobala, kufanele ufake amagama amane ukuqedela insimu.
Isinyathelo 4: Chofoza Inkinobho ethi “Hambisa”
Futhi, ungachofoza inkinobho yokuhambisa ukuze uqhubekele esigabeni esilandelayo.
Isinyathelo 5: Hlola Umphumela Wokutholwa Kwemibala
Ekugcineni! Usithumele isithombe. Manje, kuzovela imibala ethile esikrinini. Vele, uzokwazi ukubona eminye imininingwane efana ne-HEX, RGB, kanye negama lemibala. Ungaziphindaphinda lezi zinyathelo ngokusebenzisa izithombe, izithombe noma izithombe ezihlukile ukuthola imibala emisha. Kujabulele!
Uyabona, isithombe osilayishile sinemibala ehlukahlukene.
Manje, ungafaka leyo mibala imibono yakho yokudweba.